Uru | October 2021
Isi > Uru
uru nkwadebe nri
Nri nri ọ dị mma maka ụkọ ọnwụ? Nwere ike ịkwụsị ibu nri na nri nri? Nri nri bụ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji soro nri nri gị. Ma ị na-achọ ịhapụ nri a na-edozi edozi ma rie ahụike iji wulite ahụ ike, belata ibu, ma ọ bụ nwee mmetụta dị mma karị, nri nri bụ nnukwu echiche.
Flaxseed uru - otu esi edozi
Ego ole ka ị ga-eri n'ụbọchị? Ọ bụ ezie na enweghị ezigbo ndụmọdụ maka nri flaxseed, a na-ewere 1-2 tablespoons kwa ụbọchị dị ka ezigbo ahụike. Otu tablespoon nke ala flaxseed nwere calorie 37, gram 2 nke abụba polyunsaturated (gụnyere omega-3 fatty acids), gram 0,5 nke abụba na-edozi ahụ na gram 2 nke eriri nri.Mar 31, 2015
Uru chiiz ụlọ - chọọ maka azịza ya
Gini mere chiiz ulo ji adighi nma nye gi? Ọ mejupụtara lactose, mmiri ara ehi ara ehi nke ụfọdụ ndị anaghị anabata ya. Mgbe ị na-eri nnukwu cheese, tụlee ịzụ obere sodium ma ọ bụ enweghị sodium. Nnukwu oriri sodium na-ebute ọbara mgbali elu na ụfọdụ ndị, nwere ike ịbawanye ohere nke ọrịa obi (2).
Uzo mmanu ubochi mmanu - otu esi edozi
Ọ bụ mmanụ Avocado ka gị mma karịa mmanụ oliv? Mmanụ abụọ ahụ na-erite uru na ahụike obi n'ihi ọdịnaya ha yiri nke oleic acid, omega-9 fatty acid. Na mgbakwunye, ha abụọ na-akwalite ahụike anụ ahụ ma na-enyere ọnya ọnya. Ube oyibo nwere oke anwụrụ ọkụ ma e jiri ya tụnyere mmanụ oliv, yabụ ọ ga-aka mma maka usoro esi esi ọkụ ọkụ dị elu. Chukwuemeka odumegwu ojukwu
Abamuru nke ị drinkingụ galọn mmiri otu ụbọchị - azịza dị mma
Drinkingụọ galọn mmiri otu ụbọchị, ọ dị njọ nye gị? Dụ galọn mmiri mmiri kwa ụbọchị nwere ike ịrụ ọrụ nye ụfọdụ ndị mana ọ nwere ike imerụ ndị ọzọ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị obere, ị drinkingụ nnukwu mmiri ọsọ ọsọ nwere ike ime ka sodium ọkwa n'ọbara gị belata, na-ebute ọnọdụ dị egwu akpọrọ hyponatremia.
uru ahụike nke hummus
Health uru nke hummus - esi aka
Hummus ọ na-eme fattening ka ọ dị mma maka gị? Hummus dị ezigbo mma na abụba dị mma n'ihi mkpụrụ sesame na mmanụ oliv, nke nwere ihe dịka 1 tbsp (30g) nwere 8g nke abụba ndị na-adịghị edozi. Hummus dị obere na carbohydrates ma bụrụkwa ezigbo ezigbo isi iyi nke protein na osisi na fibre.16 авг. Chukwuemeka odumegwu ojukwu
Uru nke green smoothies - olee otu ị ga-esi edozi
Ọ dị mma ị drinkụ smoothie na-acha akwụkwọ ndụ kwa ụbọchị? Green smoothies bụ ụzọ dị mma iji nweta mkpụrụ osisi na nri m na-atụ aro kwa ụbọchị. Enwere m nsogbu iri nri zuru oke ụbọchị niile, mana enwere ike iri ha dị ka ihe ọ drinkụ drinkụ. A smoothie na-acha akwụkwọ ndụ bụ ihe na-edozi ahụ, mana nri nke naanị smoothies na-acha akwụkwọ ndụ (ma ọ bụ nri ọ bụla) adịghị edozi ahụ. 2015 г.
cruciferous inine uru
Mkpụrụ osisi Cruciferous bara uru - azịza dị mfe maka ajụjụ
Kedu ihe kpatara inine akwụkwụ ji emebi gị? N'okpuru: Akwụkwọ nri na-egbu egbu dị mma ma na-edozi ahụ. Agbanyeghị, ha nwere thiocyanates, nke nwere ike igbochi ịmịnye ayodiin. Ndị nwere nsogbu thyroid kwesịrị iri nri dị ukwuu nke veggies a. Ugochukwu Onwuchekwa
ube oyibo cholesterol uru
Ube oyibo cholesterol uru - otu esi edozi
Nri achicha nwere ike ibuli cholesterol? Mkpụrụ abụba na trans fat, nke a na-ahụkarị na nri na nri ngwa ngwa, nwere ike ibute cholesterol ọjọọ. Ma ọ bụghị abụba niile na-ejupụta. Unsaturated fats, ụdị dị na avocados, na-ahụta ike ụdị nke abụba. Na avocados enweghị cholesterol ọ bụla.
uru nke ịgba ọsọ
Uru nke ịgba agba - azịza ohuru
Kedu ihe sprints na-eme n'ahụ gị? Ringba ọsọ bụ otu n’ime ihe omume mgbawa kachasị mma ị nwere ike ịme. Ọ bụ mgbatị ahụ zuru oke, nke na - eme ka ọkpụkpụ, hips, hamstrings, quads, calves na abs - nke na-ewuli ogologo ahụ ike. N'ezie, ọtụtụ ndị egwuregwu na-etinye sprints n'ọzụzụ ha n'ihi nke a.
Apple uru maka ụbụrụ - ngwọta na-adịgide adịgide
Apple ọ dị mma maka ụbụrụ? Apụl dị mma iji mee ka ahụ gị na uche gị dị mma! Ọtụtụ nnyocha ọmụmụ ejikọtara iri apụl na ụbụrụ ahụike ka mma, gụnyere mbelata mmalite nke ọrịa nhụjuanya dịka Alzheimer's na Parkinson's.10 вгвг. 2016 г.
uru nke ginger
Uru ginger - nkọwa zuru ezu
Ọ dị mma ị drinkụ ginger tii kwa ụbọchị? Ginger tii anaghị enwe mmetụta dị egwu. Maka otu ihe, ọ ga-esiri ike ị drinkụ tii nke ọma iji kpughee onwe gị na ihe ọ bụla na-akpasu iwe ma ọ bụ na-emerụ ahụ. Na mkpokọta, ịchọghị iri karịa gram 4 nke ginger kwa ụbọchị - nke ahụ bụ iko ole na ole!
Abamuru nke ịkwụsị iri nri ụtụtụ - kedu ka ị si edozi
Gịnị na-eme n’ahụ́ gị mgbe ị na-ahapụ iri nri ụtụtụ? Mana nke a doro anya: Itinye nri ụtụtụ nwere ike tufuo ụda ahụ gị nke ibu ọnụ na iri nri. Mgbe ị tetara, ọbara shuga nke ahụ gị chọrọ iji mee ka uru ahụ gị na ụbụrụ gị rụọ ọrụ kacha mma na-adịkarị ala. Nri ụtụtụ na-enyere aka imeju ya. 22 апр. 2021 г.